प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री वलीको यस्तो आग्रह!!
काठमाडौँ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘लोकतन्त्र मासिन्छ’ भन्ने चिन्ता आजैदेखि फाल्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
सामाजिक पछौटेपनका कारण बोक्सीको घटना घटेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले दोषीलाई कडा कारबाही गरेर छाड्ने र कोही कसैलाई पनि छुट नदिइने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले वर्तमान सरकारले सामाजिक अपराध, मानवता विरोधी घटना र दण्डहीनतालाई सहन गरेर नबस्ने र सह्य नहुने पनि स्पष्ट पार्नुभयो । -रासस
प्रकाशित : आइतबार, फागुन २७, २०७४१८:५६
प्रधानमन्त्री ओलीलाई २०८ सांसदको मत,विपक्षमा ६० मत क-कसको पर्यो त?
माअाेवादी केन्द्रकाे संसदिय नेतामा प्रचण्ड चयन
विवेकशील साझा पार्टीकार्यालयमा टाँगिएको ब्यानर प्रहरीले हटाईदियो !
यस्ता छ छन् नयाँ शक्ति पार्टीको ल्वाङ बैठकका निर्णय (भिडियाे सहित)
त्रिचन्द्र क्याम्पस अगाडि आन्दोलनरत विद्यार्थी र प्रहरीबीच झडप ( EXCLUSIVE भिडियाे)
अब एमाले र माओबादीको अस्तित्व सकियो: मेरो मन्त्रालय हेरफेर हुन सक्छ- मन्त्रि पण्डित (भिडियो)
५९ सेकेन्ड अगाडि पत्रपत्रिका